Isiqinisekiso se-PMP - Izizathu ze-10 zokufumana i-PMP Certification - ITS Tech School
I-10 Izizathu zokwenza isiqinisekiso se-PMP
Ukuqeqeshwa kwe-certification ye-PMP
PMP kunye neNqanaba lomSebenzi
Abaphathi be-PMP bakholelwa ukuba babe neZakhono eziPhambili
I-PMP yeSatifikethi iyaxhamla
Isatifikethi se-PMP senza ukuba kwakhona kwakho kukhangeleke.
Ukwandisa uLawulo loPhatha kufuneka i-PMP Certification
Uya kuba ngumntu ovela kwi-standout phakathi kwemibutho eyingcali
Kwimeko apho unesiqinisekiso esixhasayo (isikolo esiphakamileyo okanye isizwe esilinganayo) kwaye ungenayo iminyaka engaphantsi kwemihlanu yokuhlangana kweentsebenziswano kunye neeyure ze-7500 zokuqulunqwa kunye nokuqhuba imisebenzi kunye neeyure ze-35 zokufundiswa kwemisebenzi yokusebenza, unako ukubonelela.
Ukuba isatifikethi siya kwenza kube lula ngakumbi ukufumana umsebenzi njengenkqubo okanye uMphathi weProjekthi. Ubungakanani be-PMP bukhulu. Kuzo zonke iindawo ezizodwa ezidumile kunye neziqinisekiso. Njengemibonakalo eyahlukileyo eyahlukeneyo, ngenye yeziqinisekiso eziphambili ze-10 emhlabeni.
Nangona le nto icela ukuba ingqinisiso engafanelekanga, ukwandisa abaphathi be-supervisors kunye noqeqesho lwe-PMP ukuqinisekiswa ngokuqhelekileyo ukuba bavunyelwe ukuba banamalungiselelo okubaluleka ekuqinisekiseni ukufezekiswa kwemisebenzi.
Ukwandisa uLawulo lweZakhono zoLuntu kwihlabathi jikelele kunye. Kukho iinkqubo ezininzi ezifuna iinkosana eziye zafumana uqeqesho lwe-PMP. Ingxenye yomzekeliso yinkxaso encedisayo, isakhiwo sokwakha amandla, i-oyile kunye ne-gas, amabhizinisi, ukuphuhliswa, ukuthutha kunye nobunjineli. Ngokuqinisekiswa kwe-PMP, unokuqhuba ipakethi.
Ngokwe-Survey Salary Survey, i-I-Nth Edition-Professional Management Professionals (PMP) e-US yathola i-22% ngaphezulu kweentanga zabo ezingabonakaliyo kwi-2015.
Kufuneka ungaqiniseki ukuba ufake i-PMP kwithuba elihle lokuba unomdla wokusebenza kwintsimi yokulawulwa kwemisebenzi kuyo yonke into eseleyo ebomini bakho. Oku akubonakali nje ukuzibophezela kwakho kunye nenjongo yokugcina isikhundla sakho kwisongezo esongezelelekileyo kukunceda ufunde iziphumo eziphambili kwi-field.
Inokukunceda ekuphuculeni umphathi wesigqeba sokusebenza. Ngethuba lexesha, ekugqibeleni ukugqiba esi siqinisekiso, uthatha ulwazi malunga nezixhobo kunye nezicwangciso zokwenza ukuba iqumrhu lakho likhule ngakumbi. Ekugqibeleni oku kwakha inhlonipho yakho kwintlangano. Uya kuba nethuba lokusebenza kunye kunye neenkqubo zolawulo kunye nezinye iingcali zolawulo lwezakhono emhlabeni wonke, ezinokuthi zenze ngokuqinisekileyo iingxaki zakho zokuphumelela kwengcali kunye nokuphucula.
Ngokufezekisa isatifikethi se-PMP, igama lakho liya kubandakanywa kumbutho omkhulu kunye ogqwesileyo kakhulu oqinisekisiweyo weeProjekthi zoLawulo lweProjekthi.
I-PMP yokufunda ikhethekileyo kwaye iluncedo IYO. Ifundisa iindlela zokudala zomsebenzi kwaye ivumela amalungu ukuba athathe ukufunda ukususela ekuhlaleni komhlaba kwiinkqubo ezahlukeneyo.
Iikhosi ze-3 ukuba zibe ngumlwelwe kuQeqesho loQeqesho loQeqesho